ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော် – Shwe Nay Chi
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်
ပရိသတ်ကြီးရေ မျိုးစန္ဒီကျော်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ကို အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပါလုပ်ကိုင်နေပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သမီးလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ဘဝကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့လေးကတော့ မျိုးစန္ဒီကျော်ရဲ့ သမီးလေးမွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ အသက် (၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစန္ဒီကျော်ကတော့ ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ကို “Happy Birthday ပါမေ့ချစ်သမီးလေးရေ. (9.11.2021) မှာ ကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ (၇)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှစပြီးမေ့သမီးလေး စိတ်ချမ်းသာ ကို ယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာဖြ တ်သန်းနိုင်ပါစေ။
ကြုံလာသမျှ လောကဓံကို ထက်မြတ်တဲ့ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့မေတ္တာတရားကို အသုံးပြုပြီး ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။ အမှန်အ မှားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ပြီး ဘဝမှာကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးနိုင်တဲ့အပြင် အများပေါ်မှာလည်း ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပါစေ။
မေမေ့အပေါ်မှာလည်း အရမ်းကို သိတတ် နားလည်လွန်းတဲ့ သမီးလေးကို နောက်မွေးနေ့ပေါင်းမြောက်များစွာတိုင်အောင် မေမေ စောင့်ရှောက်ခွင့်ရနိုင်ပါရစေ။
သမီးလေးရေ။”ဆိုပြီး သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို ဆန္ဒပြုရင်းသမီးလေးကို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ….
ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ သမီးေလးရဲ႕ေမြးေန႔ကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးေတြနဲ႔ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ မ်ိဳးစႏၵီေက်ာ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ မ်ိဳးစႏၵီေက်ာ္ကေတာ့ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားၿပီး ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္လက္အေနနဲ႔ကို ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႔အတူ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုပါလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ သမီးေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္း ဘဝကို ေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းေနခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ မ်ိဳးစႏၵီေက်ာ္ရဲ႕ သမီးေလးေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ေန႔ရက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ အသက္ (၇)စ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
မ်ိဳးစႏၵီေက်ာ္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့ သမီးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ကို “Happy Birthday ပါေမ့ခ်စ္သမီးေလးေရ. (9.11.2021) မွာ က်ေရာက္တဲ့ သမီးေလးရဲ႕ (၇)စ္ျပည့္ ေမြးေန႔မွစၿပီးေမ့သမီးေလး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာနဲ႔ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ပါေစ။
ႀကဳံလာသမွ် ေလာကဓံကို ထက္ျမတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ေမတၱာတရားကို အသုံးျပဳၿပီး ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါေစ။ အမွန္အမွားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ၿပီး ဘဝမွာကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုးႏိုင္တဲ့အျပင္ အမ်ားေပၚမွာလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ သမီးေလးျဖစ္ပါေစ။
ေမေမ့အေပၚမွာလည္း အရမ္းကို သိတတ္ နားလည္လြန္းတဲ့ သမီးေလးကို ေနာက္ေမြးေန႔ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ေမေမ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရႏိုင္ပါရေစ။ သမီးေလးေရ။
”ဆိုၿပီး သမီးေလးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေလးေတြကို ဆႏၵျပဳရင္းသမီးေလးကို ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
တောင်ငူအဝင် ခပေါင်းတံတားအရောက်ရထားပေါ်မှပြုတ်ကျပြီးဆုံးပါးသွားခဲ့ရတဲ့ မင်းသားပြေငြိမ်းရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်(ရုပ်သံ)